သင်သိထားသင့်သော ငွေကြေးရောင်းဝယ်ရေး အခြေခံများ - ကုန်သွယ်မှုကို လေ့လာပါ။
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်:3အောက်တိုဘာလ 2019
ငွေကြေးအရောင်းအဝယ်သည်မကြာမီရပ်တန့်သွားနိုင်သည့်လက္ခဏာမရှိသောဆုပ်ကိုင်ထားသည့်စီးနင်းမှုတွင်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းဘယ်လောက်လုပ်နေတာလဲ ငွေကြေးကိုကုန်သွယ်? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, သင်ကအကြောင်းကြားသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်စတင်ရန်စဉ်းစားပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ငွေဖြင့်မင်းကိုအမှောင်ထုထဲမ ၀ င်စေဖို့သင်သိသင့်သည့်အခြေခံများဖြစ်သည်။
Forex အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အထင်ရှားဆုံးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်ဖြစ်ပြီးတိုးတက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာငွေကြေးဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းပါပဲ။ ယခင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်စျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ကြသော်လည်းယခုအခါတွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းများပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှလက်လီကုန်သည်များသည်လည်းဈေးကွက်တွင်၎င်းတို့၏အခွင့်အလမ်းများရှိနေသည်။
သောကြာနေ့ညနေမှတနင်္ဂနွေညနေအထိသာစျေးများသည် ၂၄ နာရီအလုပ်လုပ်သည်။ ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုတွင်အာရှ၊ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်များပါဝင်သောသင်ကြားမှုသုံးခုပါ ၀ င်သည်။ အမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်များတွင်ငွေကြေးသူတို့ရဲ့စျေးကွက်နာရီအတွင်းကုန်သွယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒေါ်လာစျေးနှင့်အတူကုန်သည်များကုန်သည်များအမေရိကန်ကုန်သွယ် session တစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့ပမာဏကိုရှာပါ။
အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုမတူညီသောအရွယ်အစားဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး၊ အသေးစားငွေသည်ငွေကြေး ၁၀၀၀ မျှသာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အကောင့်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်ရန်ပုံငွေထည့်ပါကမိုက်ခရိုငွေများသည်အခြေခံငွေကြေး၏ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ယူနစ် ၁၀၀,၀၀၀ နှင့်စံ ၁၀၀,၀၀၀ ရှိသောအသေးစားတစ်ခုလည်းရှိသည်။
အစုရှယ်ယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုသည်ထုတ်ကုန်များစွာသာရှိသည်။ Forex စျေးကွက်တွင်ငွေကြေး ၁၈ ခုသာရှိသည်။ သို့သော်အခြားအရာများစွာပါ ၀ င်သည်။ Forex စျေးကွက်တွင်ကုန်သွယ်အများဆုံးငွေကြေးများပါဝင်သည်;
Pips နှင့် Pairs
ငွေကြေးလဲလှယ်နေစဉ်စတော့ဈေးကွက်တစ်ခုနှင့်မတူဘဲစတော့ဈေးကွက်တစ်ခုနှင့်မတူဘဲအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးသည်အတွဲလိုက်လုပ်ဆောင်သည်။ အားလုံးငွေကြေးစျေးနှုန်းနေကြသည် စတုတ္ထဒdecimalမအမှတ်.
ပိုက်လိုင်းသည်ကုန်သွယ်မှု၏အနည်းဆုံးတိုးတက်မှုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁% ၏ ၁၀၀၀၀ ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ micro-lot အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကုန်သွယ်မှုသည်ရည်ရွယ်ထားသောရလဒ်များမထွက်ပေါ်လာလျှင်ဆုံးရှုံးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ကုန်သွယ်ရေး Forex သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်မသင့်တော်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စွန့်စားစားစားရမည့်အလားအလာသာမကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆင့်များကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Forex trading တွင်အတွေ့အကြုံရရှိခြင်းသည်အမြတ်အစွန်းကိုပြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ကအတွေ့အကြုံအများကြီးလိုအပ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအစအတွက် forex trading ၌အခြေခံအနည်းငယ်သည်သင်၏ Forex trading ခရီးတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။